Carpal Tunnel Syndrome (လက်ကောက်ဝတ်ရှိ အာရုံကြော ဖိမိသောရောဂါ) - Hello Sayarwon
Carpal Tunnel Syndrome (လက်ကောက်ဝတ်ရှိ အာရုံကြော ဖိမိသောရောဂါ)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Carpal Tunnel Syndrome (လက်ကောက်ဝတ်ရှိ အာရုံကြော ဖိမိသောရောဂါ)
Carpal Tunnel Syndrome (လက်ကောက်ဝတ်ရှိ အာရုံကြော ဖိမိသောရောဂါ) ကဘာလဲ။
Carpal Tunnel Syndrome(CTS)ဆိုသည်မှာလက်ကောက်ဝတ်နှင့် လက်ကိုထိခိုက်သောရောဂါ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Median nerve ဆိုသည်မှာ carpel tunnelဟုခေါ်သော လက်ကောက်ဝတ်တွင်းမှ လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိှုဖြတ်သွားကာလက်နှင့် လက်ကောက်ဝတ် ၏ လှုပ်ရှားမှု နှင့် ထိတွေ့ခံစားမှုကိုထိန်းချုပ်ထားသောအာရုံကြော ဖြစ်သည်။
၎င်း သည် carpel tunnel ထဲတွင် တည်ရှိသည်။ CTS သည် လက် နှင့် လက်ကောက်ဝတ် တွင် ထုံခြင်း၊ ကျဉ်ခြင်းနှင့် စူးရှစွာထူးဖောက်သကဲ့သို့ နာကျင်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေသည်။
Carpal Tunnel Syndrome (လက်ကောက်ဝတ်ရှိ အာရုံကြော ဖိမိသောရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
CTS သည် စာရေးသားရသူများ၊ ငွေစာရင်းကိုင်သူများ၊ သားသတ်သမားများနှင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်သားကဲ့သို့သောအချို့အလုပ်အကိုင်များတွင် အဖြစ်များပါသည်။
အန္တရာယ်ဖြစ်စေ နိုင်သောအချက်များကိုလျော့ချခြင်းအားဖြင့် ရောဂါကိုထိန်းချုပ် နိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Carpal Tunnel Syndrome (လက်ကောက်ဝတ်ရှိ အာရုံကြော ဖိမိသောရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
CTS ၏ တွေ့ရများသောရောဂါလက္ခဏာများမှာနာကျင်ခြင်း၊ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်ခြင်း၊ ထုံခြင်း၊ လက်ကောက်ဝတ်၊ လက် နှင့် လက်ချောင်းများတွင် ဆုပ်ကိုင်နိုင်မှု အားနည်းခြင်း (တစ်စုံတစ်ခု ပြုတ်ကျရန် ဖြစ်နိုင်ခြေများခြင်း) တို့ဖြစ်ပါသည်။
ရောဂါလက္ခဏာများသည်လက်ကိုလှုပ်ခါသောအခါ သို့မဟုတ် လက်ဖြင့်အားစိုက်၍ ကိုင်သောအခါ ပိုဆိုးပါသည်။ အချို့လူများတွင် လက်မောင်းအပေါ်ဘက် နှင့် ပုခုံးတွင်ပါ မသက်မသာမှုများခံစားရပါသည်။ ရောဂါလက္ခဏာများသည် ညဘက် တွင် ပိုဆိုးလာပြီးအိပ်စက်ခြင်းကိုအနှောင့်အယှက် ပေးပါသည်။
သင့်ဆီမှာအထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာတွေထဲကတစ်ခုခုများရှိနေပါကသို့မဟုတ် မေးခွန်းတစ်ခုခုရှိနေမယ်ပါက ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ အထူးသဖြင့် သင်၏ နေ့စဉ် လုပ်ငန်းကိုထိခိုက်စေလာသောအခါတွင် ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းရဲ့ခန္ဓါကိုယ်တုံ့ပြန်မှုသည် မတူညီနိုင်ပါ။ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းသည် သင်၏အခြေအနေကောင်းမွန်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါသည်။
Carpal Tunnel Syndrome (လက်ကောက်ဝတ်ရှိ အာရုံကြော ဖိမိသောရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
CTS ဖြစ်ပွားသူများတွင် carpel tunnel ဟုခေါ်သော လက်ကောက်ဝတ်တွင်းလမ်းကြောင်း သည် လက်ကောက်ဝတ်၏ရောင်ရမ်းမှု ကြောင့် ကျဉ်းမြောင်းသွားပါသည်။ သေးငယ်သွားသောcarpel tunnel သည် သူ့အတွင်းတွင်ရှိသောmedian nerve အာရုံကြောကိုဖိညစ် ပြီးနာကျင်ခြင်း နှင့် အခြားရောဂါလက္ခဏာများကို ဖြစ်စေပါသည်။
စာရိုက်ခြင်း၊ စာရေးခြင်း နှင့် ကွန်ပြူတာမောက်စ် ကိုင်ခြင်းကဲ့သို့သောတစ်နည်းလမ်းထဲဖြင့် လက် နှင့် လက်ကောက်ဝတ်ကိုထပ်ကာထပ်ကာလှုပ်ရှားခြင်းတို့သည် CTS ကို ဖြစ်စေပါသည်။
ဟော်မုန်းပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင် များတွင် လည်း CTS ရနိုင်ပါသည်။ ပြင်းထန်စွာဖျားနာခြင်း၊ အရိုးနှင့် ကြွက်သားရောဂါများ၊ လည်ပင်းသိုင်းရွိုက်ဖွံဖြိုးမှုနည်းခြင်း (hypothyroidism) နှင့် ဆီးချို တို့သည်လည်း CTS ဖြစ်စေမှု ကို မြင့်တက်စေပါသည်။
ငါ့ဆီမှာ Carpal Tunnel Syndrome (လက်ကောက်ဝတ်ရှိ အာရုံကြော ဖိမိသောရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Carpal Tunnel Syndrome ကိုဖြစ်ပွားနိုင်ချေမြင့်စေသည့် အကြောင်းရင်းများများစွာရှိပါသည်။ ဥပမာ-
CTSသည် ယေဘုရအားဖြင့် အမျိုးသမီးများတွင် ပို၍ ဖြစ်ပွားပါသည်။
ဆီးချိုသွေးချိုကဲ့သို့ အာရုံကြောထိခိုက်စေသောအခြေအနေများသည် median nerve အပါအဝင် အာရုံကြောများကိုထိခိုက်နိုင်မှုကို မြင့်တက်စေပါသည်။
လေးဖက်နာရောဂါ ကဲ့သို့သောရောင်ရမ်းသောအခြေအနေများသည် လက်ကောက် ဝတ် ၏ အကြောမျှင်များအားထိခိုက်စေပါကာ median nerve အပေါ် ဖိအားသက်ရောက်စေပါသည်။
သွေးဆုံးခြင်း၊ အဝလွန်ခြင်း၊လည်ပင်းသိုင်းရွိုက်ရောဂါ နှင့် ကျောက်ကပ်ပျက်ခြင်းကဲ့သို့သောအချို့ အခြေအနေများသည် လည်း CTS ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
တုန်ခါမှုရှိသာကိရိယာများဖြင့် လုပ်ကိုင်ခြင်းကဲ့သို့သောအချို့ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာအချက်များ
Carpal Tunnel Syndrome (လက်ကောက်ဝတ်ရှိ အာရုံကြော ဖိမိသောရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
Carpel Tunnel Syndrome (CTS)ဟုတ်မဟုတ်ကိုဘယ်လိုအဖြေရှာအတည်ပြုသလဲ။
ဆရာဝန်သည် လက်ကောက်ဝတ်အားစစ်ဆေးပါသည်။ ရောဂါလက္ခဏာများပေါ်လာရန် median nerve အပေါ်မှကိုင်၍ ကွေးကာအချိန်အနည်းငယ် စောင့်ပါ။ လက်ကောက်ဝတ် ၏ အာရုံကြောနှင့်ကြွက်သားများအားစမ်းသပ်သောအထူးစမ်းသပ်မှု(EMG)ဖြင့်လည်း စမ်းသပ်နိုင်သည်။
Carpal Tunnel Syndrome (လက်ကောက်ဝတ်ရှိ အာရုံကြော ဖိမိသောရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသမှုတွင် အဆင့်နှစ်ဆင့် ပါဝင်ပါသည်။ ပထမတစ်ခုမှာနေထိုင်မှု ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ CTS ဖြစ်စေသောအရာများပြုလုပ်ခြင်းကိုရပ်တန်ရမည်ဖြစ်သည်။ အလုပ်ကိစ္စ ဖြစ်နေပါကပြောင်းလဲရန် ခက်ခဲပါသည်။ အလုပ်ရှင်နှင့် ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် လက်ကောက်ဝတ်အားစာရိုက်ရာတွင် အဆင်ပြေအောင် ကူညီပေးသောလက်ကောက်ဝတ် အပတ် များအသုံးပြုခြင်းသည်လည်းသက်သာရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ပညာရှင်များကလည်းမတူညီသောနည်းလမ်းများစွာ ဖြင့် သက်သာစေရန် အကြံပြုနိုင်ပါသည်။
ဒုတိယတစ်ခုမှာmedian nerve အပေါ်မှ ဖိအားကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဆေးများ၊ လက်ကောက်ဝတ်အားပတ်တီးစည်းခြင်း နှင့် ခွဲစိတ်ကုသခြင်းတို့ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ လက်ကောက်ဝတ်အားပတ်တီးစီးခြင်းသည် ညဘက်တွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သို့သော် အချို့လူများသည် နေ့ဘက်တွင်လည်း ပြုလုပ်ကြပါသည်။ ဆေးများသည် အရောင်ကျစေခြင်း ဖြင့် ခဏတာသက်သာမှုကိုပေးပါသည်။ လက်ကောက်ဝတ်အတွင်းသို့ ဆေးထိုးသွင်း၍ ကြာကြာသက်သာမှု ရရန် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
အခြားကုသမှုများသည် သက်ရောက်မှု မရှိပါက nerve အတွက် နေရာပိုရအောင် ခွဲစိတ်ကုသမှု ပြုလုပ်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ခွဲစိတ်ကုသမှု ပြုလုပ်ခြင်းသည် လျင်မြန်စွာသက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။ ခွဲစိတ်ကုသမှု ပြုလုပ် ပြီးနောက် ပြန်လည် ကောင်းမွန်စေရန်နှင့် ရောဂါလက္ခဏာအသစ်များမပေါ်စေရန် အနည်းဆုံး ၆ ပတ်အထိလက်ကောက်ဝတ်အားအနားပေးပါ။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းကCarpal Tunnel Syndrome (CTS)ကိုကုသရာမှာဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါလူနေမှုပုံစံများနှင့် အိမ်သုံးကုထုံးများသည်CTSကိုကုသသောနေရာတွင် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
ကုသမှုယူရန် နောက်ကျပြီး ကြွက်သားများအားပျော့ခြင်း ဖြစ်လာပါကအပြည့် ပြန်လည် ကောင်းမွန် လာမှု နည်းပါသွားပါမည်။
နေ့ဘက်တွင် လက်ကောက်ဝတ်နှင့် လက်အားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်လက်ကောက်ဝတ် ပတ်တီးကိုခဏချွတ်ထားပါ။ လက်ကောက်ဝတ်ကို လုံးဝမလှုပ်ရှားခြင်း၊လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ခြင်းများကိုမပြုလုပ်ရပါ။
Carpal tunnel syndrome. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/carpal-tunnel-syndrome/basics/risk- factors/con-20030332
Porter, R. S., Kaplan, J. L., Homeier, B. P., & Albert, R. K. (2009).The Merck manual home health handbook. Whitehouse